Madaxweynaha iyo wasiirrada Puntland oo ka shiray ka gaashaamashada Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe – Mareeg.com: Golaha wasiirada Puntland ayaa Madaxtooyada magaalada Garowe ku yeeshay shirkoodi todobaadlaha ahaa, waxana shir gudoominayay Madaxweynaha maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Kulanka ayaa lagu lafa-guray arrimaha amniga, Xeerka Xamuulka, Gaadiidka dowladda iyo hagaajinta wadada Sunijif oo go’aday xiligii roobabkii duufaanta watay.
In ka badan 40 xubnood ayaa soo xaadirtay kulankan uu joogay sidoo kale Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiim Cabdulaahi Cumar, waxana markii uu soo idlaaday saxaafadda hadal kooban siiyay agaasimaha guud ee Madaxtooyadda Dr. Deeq Saleebaan Yuusuf.
Agaasimaha ayaa sheegay in goluhu warbixin ka dhageystay Wasiirka Amniga, taasi oo ku saabsanayd Nabadgelyada guud ee Gobollada maamulka iyo baahida loo qabo inay wada shaqeeyaan laamaha ammaanka iyo dadweynaha degan deegannada maamulkaasi.
Wuxuu sheegay in si wayn looga dooday amniga, wasiirka amniga ee Puntland Xasan Aloore ayaa laga dhegaystay war-bixin dheer oo amniga la xiriira iyo ololaha ka dhanka ah Al-shabaab ee ka socda koonfurta dalka.
Dowladda ayaa u diyaar garoobaysa in laga hortago khatarta Puntland kaga iman karta duulaanka ka dhanka ahAlshabaab, Agaasimaha ayaa sheegay in dadweynaha laga dalbaday in ay dowlada kala shaqeeyaan ka hortaga khataraha amniga.
Wasaaradda Gadiidka iyo hawlaha guud oo soo gudbisay xeerka Xamuulka ayaa wasiiradu ka doodeen, sidoo kalena waxa la isla qaatay diiwaangelinta gaadiidka dowladda iyo diwaangelinta wadayaasha (Darawalada) si loo dhawro hantida dowladeed.
Waxa uu Goluhu isla meel dhigay qodob horey uu soo jeediyay Madaxweynaha Maamulka Puntland oo ahaa in la diiwaangeliyo hantida gaarka ee uu leeyahay mas’uulka dowladeed si ay qayb uga noqoto ladagaallanka musuq-maasuqa.
Buundada Sunijiif oo dhowaanahan jabneyd ayaa Madaxweynaha Puntland dhagax dhigi doona si loo bilaabo hawsha dib u dhiskeeda. Waxana dib loo furey mashaariicdii Puntland ka socday sida JPLG, iyadoo xukuumadda fasaxday bixinta qoondeynta 10% ee ku soo aaday.
Ugu danbeyntii ayaa agaasimaha guud uu sheegay in wafdi uu horkacayo madaxweynaha Puntland ay maalinka beri ah u bixi doonaan dhanka deegaanka Dangorayo ee gobolka Nugaal, halkaasi oo qoysaskii duufaantu wax yeeshay loogu qaybin doono mucaawino ka timid dalka Turkiga.